रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ जाउलाखेल लगिँदै, जाउलाखेल पुगेपछि मात्रै भोटो जात्रा हुने दिनको टुङ्गो लाग्ने!
Mon, May 25, 2020 at 8:56pm
पुल्चोकबाट गाबहाल, गाबहालबाट मंगलबजार, मंगलबजारबाट लगनखेलसम्म त्रिलोक भ्रमण सकिएपछि रातो मत्स्येन्द्रनाथको जाउलाखेल भ्रमण हुने गरेको छ
बिहिवार, २७ बैशाख २०७५,	आहाखबर	1.64K
ललितपुर, बैशाख २७
लगनखेलको थटिटोलमा रहेको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथलाई आज(विहीबार) जाउलाखेल लगिँदैछ। रथलाई बिहिबार नै जाउलाखेल पुर्‍याएपछि चौथो दिन (आइतबार) भोटो जात्रा हुने ज्योतिषहरूको भनाइ छ।
मत्स्येन्द्रनाथ जाउलाखेल पुगेपछि मात्रै भोटो जात्रा हुने दिनको टुङ्गो लाग्ने ज्योतिष दैवज्ञ कीर्तिमदन जोशी बताउँछन् । उनी भन्छन, “केही समस्या आइपरेन र रथ आजै पु¥याउन सकियो भने भोटो जात्रा आइतबार हुनेछ ।” रथ पुगेको दिनका हिसाबले चौथो दिनमा भोटो देखाइने परम्परा छ ।
यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरुभन्दा पहिले नै रथलाई जाउलाखेल लग्न लागिएको, सबै कुरा राम्रो भएको र साइत चाँडो निस्केकाले वैशाख महिनामा नै भोटो जात्रा हुन लागेको हो । उनी भन्छन, “कुनै–कुनै वर्षमा लामो समयसम्म साइत आउँदैनथ्यो यो वर्ष चाँडो निस्कियो।
कारणबस रथ आज साँझ पुगेन भने जुन दिन पुग्छ त्यसको चौथो दिन भोटो जात्रा हुनेछ । विगतका कतिपय वर्षमा रथ ढल्कँदा जाउलाखेल नपुगी बीचमा रोकिएको थियो । उनी भन्छन्, “हुन त नगरको भित्री भागमा भन्दा बाटो ठूलो छ तैपनि जाउलाखेल नपुगी भन्न सकिँदैन।”
आगामी जेठ २ गतेबाट महिनाभर मलमास छ। मलमास अवधिभर रथ तान्नु शुभ मानिँदैन।
मत्स्येन्द्रनाथको पुल्चोकबाट गाबहाल–मंगलबजार हुँदै लगनखेलसम्मको यात्रालाई त्रिलोक भ्रमण भनिन्छ । त्यस्तै, थटिटोलबाट जाउलाखेलसम्मको यात्रालाई सप्तग्राम जात्रा पनि भनिन्छ । यसलाई सात गाउँको जात्रासमेत भनिन्छ । उनी भन्छन्, “यसलाई नगरभन्दा बाहिरी भेगका बासिन्दाको जात्रा पनि मानिन्छ।” पहिले थानकोट, कीर्तिपुरलगायतका स्थानका बासिन्दा रथ तान्न आउने गर्थे।
मत्स्येन्द्रनाथको जात्राका बेला भोटो प्रदर्शन गरिने परम्परा छ। सरकारले भोटो जात्राका दिनमा सार्वजनिक बिदासमेत दिँदै आएको छ। कथनअनुसार नागराजा कर्कोटककी श्रीमतीलाई आँखाको रोग लागेपछि उपचारका लागि नागले एक किसानलाई बोलाए। नागले जसरी भए पनि आफ्नी श्रीमतीको रोग निको पार्नै पर्ने नपारे अनिष्ट हुने बताएपछि वैद्य सङ्कटमा परे।
किसानले नागकी श्रीमतीको रोग नै पत्ता लगाउन नसकेपछि हात माड्दै बसिरहे। हात माडेका हुनाले यसबाट मयल निस्कियो । उनले त्यही मयललाई औषधि भनेर नागलाई दिए। त्यो औषधिको प्रयोगपछि नागकी श्रीमतीको रोग निको भयो।
जात्रामा भूतले त्योे भोटो लगाएर आएको थियो। भोटो देखेपछि किसान र भूतबीच भोटोको स्वामित्वबारे भएको विवादले झगडाको रुप लियो। केही गरी पनि झगडा साम्य नभएपछि निर्णयका लागि उनीहरु मत्स्येन्द्रनाथकहाँ पुगे ।
मत्स्येन्द्रनाथले जसले प्रमाण ल्याउनसक्छ उसैलाई दिने भत्रे निर्णय गरे । तर दुवैले प्रमाण जुटाउन नसकेपछि भोटो मत्स्येन्द्रनाथले नै राखे । उनी भन्छन, “त्यसैबेला देखि प्रत्येक वर्ष यो कसको भोटो हो ? प्रमाण सहित उपस्थित होउन भन्ने उद्देश्यले चारैतर्फ भोटो देखाउने चलन चल्दै आएको हो।”
मत्स्येन्द्रनाथको महास्नानबाट शुरु हुने जात्रा भोटो देखाएसँगै टुङ्गिन्छ। मत्स्येन्द्रनाथलाई महिला र पुरुष दुवै रुपमा मानिने भएकाले हिन्दू धार्मिक परम्पराअनुसार ब्राह्मणबाट महिला र पुरुषलाई गरिने दशकर्म गरिन्छ। बौद्ध धर्मअनुसारका सबै कर्म बज्राचार्यले गर्छन्। विधिवत् रुपमा दश कर्म सकिएपछि मात्रै रथारोहण गराई रथयात्रा शुरु हुन्छ।
पुल्चोकबाट गाबहाल, गाबहालबाट मंगलबजार, मंगलबजारबाट लगनखेलसम्म त्रिलोक भ्रमण सकिएपछि रातो मत्स्येन्द्रनाथको जाउलाखेल भ्रमण हुने गरेको छ। यसलाई दक्षिणागमनसमेत भनिन्छ । जोशी भन्छन, “मत्स्येन्द्रनाथ दक्षिणायन हुँदा बुंगमती र उत्तराणायन हुँदा पाटन बस्नुहुन्छ।”